မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: သီးလေးသီး အငြိမ့် ပွဲ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
သီးလေးသီး အငြိမ့် ပွဲ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:43 PM
Vital Voices' 2008 Global Leadership Awards - Laur...
မြန်မာပြည်က အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးရရှိရေး
နိုဗယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်များရဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လ...
Report of SG, UN General Assembly Sixty-third sess...
Immediate release of AAPP Statement
ဒါပေါ့..ဆင့် အ၀ှါ ခွေးမျှော်နေတာ
ထွီ .. ပြည်သူတွေကို ကျ မျက်နှာလွှဲခဲပစ်ထားတယ်။ တရား...
အမေစု အိမ်ရှေ့ မှ စစ်သူတောင်းစားများ
စစ်ခွေး အစားခံရသော သားငယ်များ
ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးခင်းကြီးကို အမှတ်တရ သုံးသပ်ခြင...
နှစ် (၂၀) မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ ကျောင်းသားတပ်မတော်..
Lion Jiou Mountain ၏ နာဂစ်သို့ ကူညီလက်များ
ဒို့ အမျိုးတွေရဲ့ အပြုံးတွေ မပျောက်ကွယ်စေအောင် ထိမ...
Myanmar6Months On: Delivering Education in Emerg...
Assisting communities affected by cyclone Nargis
ဒီလို Virus သတ်ပါခင်ဗျား
( န အ ဖ ) တို့ပြော သော တိုး တက် နေ သော မြန် မာြ...
တက်ချင်သူတွေ လာကြဗျို့ ။ မျိုးချစ်စိတ်ဘဲရှိဖို့ လ...
အဟမ်း အဟမ်း အမိန့် တော်မှတ်မယ်။
မယားရောင်းရန် ရှိသည် (သတင်းဆောင်းပါး) Mizzima net
သန်းရွှေခေတ်မှ ပေါက်ဖွားသော အကြံကုန်စီးပွားရေးပညာသည...
တရုတ် chemical ဘဲဥဆားစိမ်ရမယ်
နို့ မှုန့် ရောင်းချင်ရင်လာလေ..တပြည်လုံးကို သတ်ချင...
မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလိယ လက်နက်တွေ ဖွက်ခယူ နအဖက ဖွ...
လေထဲမှာ တိုက်အိမ်တွေ ရောင်းနေတယ်။
ဘတ်ဝါယာ ကြိုးဖယ်တာ ဒါကြောင့်ကိုး
Burma's bloody trade
Burma, country in conflict
HIV/AIDS ရောဂါကို ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် အခမဲ့ကုသပေးနေသည...
ဆရာကြီးဝသုန် ၏ ဈာပန အခန်းအနား။
ကြပ်ပြေး က အရှုပ်တော်ပုံ အမှတ် (၁၁)
Voices of the Saffron Revolution: One year later
အကျဉ်းအကြပ်အခက်အခဲကြားက လှုပ်လို့ ရတဲ့နေရာက လှုပ်ရ...
မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ တိုးလာနေပြီ။
NLD ဆို လုပ်ကြံပုဒ်မ နဲ့ ဆွဲဖြဲဖို့ သာ ပြင်နေတော့တ...
ဘဘကြီး ဝသုန်သို့ 
ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ရဲဘော်တို့ 
လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိူင်ကြဖို့ 
virus အကိုက်ခံရသူ ၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့ အကြုံ နှင့်ေ...
ဆရာကြီးဝသုန် သို့ အမှတ်တရ
န အ ဖ တို့ပြော သော တိုး တက် နေ တဲ့ မြန် မာ ပြည်...
Chinese oil firm accused of abuses, contamination ...
MRTV လိမ်နေသည်။ မြန်မာ့သတင်းစာလိမ်နေသည်
ရမည် ရှာနေတယ်ဗျို့ 
DEMOCRATIZATION WITHOUT MASS PARTICIPATION?
Tele conference ဖိတ်ကြားခြင်း
"ဆောင်းဦးပေါက် တေး "
Myanmar's Failure to Talk With Suu Kyi Frustrates ...
တဖြေးဖြေး စစ်ရုံးနဲ့ နီးအောင် လာနေပြီ
လူငယ်တွေ ရှိနေသ၍ Generation Wave ဆိုတာ မသေဘူး
KNU EC အဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း
အဖေကြီး လမ်းစဉ် လိုက်နေတဲ့ အမျိုးသတ်ခွေးများ
မိန်းမပေမဲ့ အထင်မသေးနဲ့ 
ပျော်ရွှင်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ကိုမင်းကိုနိုင်
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာနဲ့ နအဖ..
ရွေပြည်သာမှာ ဗုံးကွဲ တစ်ဦးသေ
မြန်မာမြေ မှ ကိုယ်ပျောက်စစ်သည်များ